JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်တပ်အချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၃) လက်အောက် တပ်ရင်း (၂၁) ဒေသ ဖြစ်သော ခရိန်မူဒန်ကျေးရွာတွင် ရောက်ရှိနေသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ် များသည် ဇန်န၀ါရီလ (၂၇) ရက် ညနေ (၅း၄၅) နာရီခန့်တွင် အချင်းချင်းမှားယွင်း ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ ဗမာစစ်တပ် အချင်းချင်း မှားယွင်းပစ်ခတ်နေချိန်တွင် စိန်လုံ ကောင်းလောဒ့်တွင် နေရာယူထားသော ဗမာစစ်တပ်မှ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သတင်းကြားသိရပါသည်။
There was false fighting between each other of Burmese troops, who are settled in Hkring Mu Dan village, which is under KIA (3rd) brigade area at 05:45 pm on 27th January, according to KIA front line officer report. While they were shooting each other, the Burmese troops from Sin Lung fired with heavy artillery weapon to the battle place.
rai sa karai gasang la jang lam rai nga ai chyeju sha kawn ga law.